Ukukhiqizwa kwe-Ultrasonic ye-Flavor Izithako - I-Hielscher Ultrasound Technology
Isizinda se-ultrasonic sandisa isivuno futhi sinciphisa inqubo yesikhathi.
I-Ultrasound iyinhlangano yobuchwepheshe obuncane bokukhipha okuluhlaza okuluhlaza njengoba kuyinkqubo ephephile isebenzisa iziphephelo eziphephile.
Ngaphezu kwalokho, inekhono eliphezulu kakhulu lokusebenza ngamandla.
Isizinda se-Ultrasonic yindlela yokuhweba yokukhiqiza izitshalo eziphezulu zezokudla & isiphuzo, izidakamizwa nezimonyo zezimonyo.
“Ukusebenzisa i-ultrasound, ukukhipha okugcwele manje kungagcwaliswa ngamaminithi aphindaphinda, ukunciphisa ukusetshenziswa kwe-solvent, ukwenza lula ukuphathwa nokusebenza-up, ukunikeza ukuhlanzeka okuphezulu komkhiqizo wokugcina, ukuqeda ukwelashwa kwamanzi amfucuza kanye nokudla okuyingxenye eyodwa kuphela amandla amancane evamile adingekayo ukuze kusetshenziswe indlela ejwayelekile yokukhipha njenge-Soxhlet extraction, i-maceration noma i-Clevenger distillation. Amakilasi amaningana okudla okufana nama-aromas, ama-pigment, ama-antioxidants, namanye ama-organic and mineral compounds akhishwe, ahlaziywa futhi ahlelwe ngokuphumelelayo ematrices ahlukahlukene (ikakhulukazi amathisisi ezilwane, ama-microalgae, amade, ukudla kanye nezinto zokutshala).” [Chemat et al. 2017]
Njengomholi wemakethe, uHielscher Ultrasonics usungule isisekelo sedatha ebanzi yolwazi mayelana nezinqubo zokukhipha i-ultrasonic kufaka phakathi ukukhishwa kwezinongo, amakhambi, izimbali, izithelo, imifino ukukhiqizwa kwama-flavour namakha. I-Hielscher Ultrasonics ithole ulwazi olunzulu ngokukhishwa kwezinto ezahlukahlukene zezitshalo ezifana ikhofi, i-safari, amagilebhisi (iwayini), i-oki, amahlamvu wetiyi, i-lavender, i-mint, stevia, upelepele, i-vanilla, i-cocoa, amahlamvu we-boldus, nabanye abaningi.
Izinqubo ze-ultrasonic yesikhumba zingenziwa cishe cishe noma yiziphi izixazululo ezifana namanzi, utshwala, amafutha, i-hexane, i-benzene njll.
Ukukhiqizwa kwama-flavour, ama-perfume nezinsimbi ezisebenzayo, ezizosetshenziswa njengezithako ekudleni & isiphuzo, izidakamizwa, izimonyo zezimonyo namafutha, ukusetshenziswa kwezinto ezingekho ezinobungozi, izitshalo eziluhlaza ezifana namanzi nodoti kuyinzuzo enkulu.
Amafomu wesakhiwo se ultrasonic:
I-Ultrasonic Soxhlet (i-Sono-Soxhet)
I-Ultrasonic Extractical Extraction
Indlela ye-ultrasonic inikeza isizinda esingcono uma siqhathaniswa nokuqhathanisa nezinqubo eziningi ezijwayelekile zokufakelwa, isb. I-maceration, ngokwezikhathi zenqubo, isivuno esiphezulu, ukonga okungaphezulu kwamandla, ukuhlanzeka, ukuphepha kanye nekhwalithi yemikhiqizo. Ikakhulukazi mayelana nokukhiqizwa kokudla, isiphuzo kanye nezithako zezokwelapha nezimonyo, i-ultrasonic extraction technique iyinzuzo enkulu ngokuphathelene nokuphepha komkhiqizo.
I-Flavour Emulsions engavamile
I-emulsions iyinhlanganisela evamile yokusebenza ngokudla kanye neziphuzo mayelana nokunambitheka, ukubaluleka komsoco nokuzinza. Ikakhulukazi ekwakheni iziphuzo, ukucaca kuyisici esibalulekile kusukela umkhiqizo wokugcina akufanele ufeze izindinganiso zekhwalithi nezondlo kuphela, kodwa futhi nezindlela zokudla. Ukuze uthole iziphuzo ezicacile nokudla, lokhu kusho ukuthi okungeziweko okungeziweko akufanele kuphazamise umnqopho wokugcina wekhwalithi ohlosweko. Ngakho-ke, ukufudumala okucacile kulula ukuyisebenzisa. Ngenxa yobukhulu bawo, ama-nanoemulsions avulekile futhi aguquguqukile (okungenani iso iso). Ngenxa yokuqina kinetic ephezulu, i-viscosity ephansi, ukukhanya okuphezulu, nokuzinza okuphezulu ngokumelene nezidakamizwa, ukhilimuza, ukuhlangana kwe-coalescence, nokuqubuzana, kusetshenziswe kabanzi njengezithako.
Ikhudlwana ubukhulu be-droplet / i-particle, i-opacity eyengeziwe ibambe iqhaza kumkhiqizo wokugcina. Ukuze kusetshenziswe iziphuzo ezicacile ukusetshenziswa kwe-emulsion ecacile nge-nano-droplets kunika imiphumela emihle kakhulu. I-ultrasonic emulsification inika amandla ukukhiqiza i-W / O, i-O / W, i-emulsions engenayo, kanye nokuthutha okuphindwe kabili noma okuphindwe kabili nge-nano-range (okuthiwa i-miniemulsions, i-nanoemulsions, i-ultrafine emulsions, noma i-submicron emulsions). Usayizi we-Droplet lungalungiswa futhi lulawulwe yizinqubo ze-ultrasonic. Amadivaysi e-ultrasonic aseHielscher alawulwa ngokucophelela ukuze kube nemiphumela ephumelelayo nenqubo yokukhiqiza.
Nge-MultiPhaseCavitator, uHielscher usungule ukufakwa okuyingqayizivele kweseli lokugeleza ukuze kuthuthukiswe i-emulsification ye-ultrasonic.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-MultiPhaseCavitator!
isizinda ultrasonic kusuka amakhambi
ukubuyela ngokushesha ekutshalweni kwezimali
Ukusetshenziswa kwe-liposomes emikhiqizweni yemithi nasekudleni kuyanda ngokuqhubekayo. AmaLiposomes angasetshenziswa njengezithwali zamangqamuzana asebenzayo, isib izakhi zomzimba nezidakamizwa. Ngokusebenzisa i-sonication, ama-liposomes angakhiwa ngokumiswa kwe-lipid / ukumiswa kwamanzi noma nge-sonication ye-multilamellar vesicles (MLVs). Ngenqubo ye-emulsion ye-ultrasonic, ama-bilid e-lipid aqhekeka aba ama-fractures amancane, ukuze lezi zingcezu zizenzele ama-vesicles amancane ama-unilamellar (ama-SUV) akhiwa ngama-phospholipids. Ngesikhathi senqubo ye-sonication, izithako ezisebenzayo zingafakelwa kuma-liposomes.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokukhiqizwa kwe-ultrasonic yama-liposomes!
Ithebula elingezansi linikeza isibonakaliso sendlela yokucubungula esenzakalweni yamasistimu ethu athandwa kakhulu e-ultrasonic:
I-CO ecwecwezelayo ne-CO2 ukukhipha enye yezindlela ezibaluleke kakhulu zokukhipha uma kuziwa ekukhiqizeni ama-flavour namafutha.
I-carbon dioxide enokuziphendulela iyisimo se-selective esikhethayo esinokuguquguquka. Ukukhethwa kwayo kanye namandla okuxazulula amandla kuncike ekutheni inani eliguquguqukayo elingathonywa yingcindezi nokushisa.
Ngokuhlanganisa isizinda esiyingqayizivele nge-sonication, kunokwenzeka ukuthi kusetshenziswe izixazululo zesigaba sokudla ezinjengoba utshwala noma amanzi kodwa nokho ukufeza izinga eliphezulu lokukhuphula kanye nezitshalo eziphakeme.
Sebenzisa ifomu elingezansi ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa mayelana nezinhlelo zethu zokufakelwa kwe-ultrasonic nezinhlelo zabo zokusebenza!
Amaprosesa wokudla we-ultrasonic ase-Hielscher atholakale kunoma iyiphi inqubo yesilinganiso.
Vakashela isikhungo sobuchwepheshe beHielscher futhi senze lebhu!
Šic Žlabur, J .; I-Voća, S .; Dobričević, N .; Brnčić, M .; I-Dujmić, F .; I-Rimac Brnčić, S. (2015): Ukusebenza kwe-ultrasound kusizwe ukukhishwa kwezithako ezisebenzayo kusuka kumakhasi weStevia rebaudiana Bertoni. Int. I-Agrophys. 29, 2015. 231-237.
Okuningi mayelana ne-Ultrasonic Extraction
Isizinda se-ultrasonic yindlela eyaziwa futhi enokwethenjelwa yokukhiqiza iziqhumane ezivela ezintweni ezihlukahlukene zokwakheka ezitshaliwe. Amandla amakhulu e-ultrasonics akhulisa ukudluliswa kwamandla phakathi kwezinto eziluhlaza kanye ne-solvent ngokuxosha i-solvent esakhiweni seseli bese uyifinyelela ngesilinganiso se-approx. Izikhathi ezingu-20 000 ngomzuzwana (ngo-20kHz). I-Sonication iye yafakazelwa ukuthi iyindlela elula kakhulu, kodwa ephumelelayo kakhulu – ukudala izithelo eziphakeme kanye nokukhishwa kwekhwalithi ephakeme ngesikhathi sokucubungula esifushane!
Izinto ezilandelayo zivele ziphumelele kakhulu ezikhishwe yi-ultrasonication:
Izinongo: i-safari, i-pepper (isb. capsaicin), i-ginger, isinamoni, i-vanillin / i-vanilla, i-rosmarinic acid, i-sage, i-rosmary, i-majoram, i-basil, njll.
Amakhambi: i-peppermint, i-teas (isb. emnyama, eluhlaza, i-Pai Mu Tan, i-jasmin, i-rooibos, i-honeybush), i-spearmint, i-stevia, i-cannabis, njll.
Izimbali: lavender, patcholi, ylang-ylang, rose, njll.
Izithelo nemifino: iwayini, amagilebhisi / imbewu yamagilebhisi, ikhofi, i-cocoa, iminqumo, i-orange / orange peel, utamatisi, imbewu ka-guarana, imbewu ye-oleaginous (ama-alimondi, ubhontshisi we-soya, imbewu yepapa, i-flaxseeds, i-sunflower, i-rapeseeds), i-pomgranate peel, isipinashi, i-mulberry, izimpande , njll.
Ama-microorganisms: i-seaweed, i-spirulina, i-algae encane (i-Nannochloropsis spp microalgae, iNannochloropsis oculata microalgae, iDunaliella salina microalgae), i-Synechococcus sp. i-cyanobacteria, imvubelo ye-Xanthophyllomyces dendrorhous, i-Trichosporon oleaginosisus imvubelo, ukhunta oleaginous, i-Cordyceps sinensis ukhunta
Okukhishwe okuhlosiwe, okutholwe yi-sonication, kungamafutha abalulekile, amavithamini, ama-lipid, amaprotheni, nama-phytocomplexes afana ne-phenolics, ama-antioxidants, ama-polysaccharides, ama-oleoresins, ama-esters, ama-eseyi, ama-hydrolysates amaprotheni, ama-amino acid, ama-saponins, ama-flavonoid, ama-alkaloids (isib. i-codeine, i-thebaine), imibala / imibala (ama-carotinoids, i-chlorophyll, i-phycocyanin), ama-anthocyanins, i-limonene, i-alantolactone, isoalantolactone nezinye izinto ezisebenzayo.
Mayelana nokususa okuhlaza
Ukukhipha okugqinsi kugxile ezindleleni eziphathelene nokusingqongileyo, ezinomsoco. Ngakho-ke, ukunciphisa amandla okusetshenziswa kwenqubo yokusetshenziswa kwamakhemikhali ehlukile kanye nezinto ezibonakalayo ezivuselelweko, yizinto ezibalulekile zokufakelwa okuluhlaza. Okuhlosiwe ukuqinisekisa ukukhishwa kwekhwalithi ephephile nephezulu. Ukuze uthole umkhiqizo ophephile eliphezulu, kubalulekile ukusebenzisa ezinye, izixazululo eziphephile futhi eziphephile. Ngokunciphisa utshwala obuningi benqubo kanye nemikhiqizo yokugcina, abathengi bazuza emkhiqizo onempilo, ephephile nabakhiqizi ukudala imvelo yokuphepha yabasebenzi babo.